Noocyo yaanyo | January 2020
Noocyo yaryar oo lagu koriyo
Beeraley kasta oo doonaya inuu sameeyo wax uu jecel yahay - beerta - ma aha oo kaliya xagaaga laakiin sidoo kale jiilaalka. Si arrintan loo sameeyo, dadku waxay la soo baxeen koriyo - meelaha la ilaaliyo ee ciidda, halkaas oo aad kori karto dalag kala duwan cimilada iyo heerkulka. Haddii aad horay u dhisay aqalka dhirta lagu koriyo oo raadinaya noocyo yaanyo ah oo hubaal ku kori doona boggaaga, markaas jawaabta ayaa ku jirta maqaalkan.
Noocyada ugu fiican ee yaanyada: sharaxaadaha, faa'iidooyinka, faa'iido darrada
Beerta bilowga ah ayaa laga yaabaa inay xiiseyneyso su'aasha ah waxa loo baahan yahay in la beeray si loo helo dalag aad u fiican. Maqaalkan waxaa loogu talagalay kuwa doonaya in ay ku guuleystaan ​​yaanyada sii kordhaya. Ka dib dhan, waxaa jira noocyo kala duwan ee yaanyada, oo dhammaantood waa ay kala duwan yihiin dhadhanka, midabka, cabbirka iyo sifooyinka kale. Sidaa darteed, haddii aad naftaada u dajiso si aad u hesho yaanyo delicious, ka dibna macluumaadkaan waa adiga.
Sida loo daryeelo yaanyo Liang
Way adagtahay in la doorto nooca gaarka ah ee yaanyada ee noocyada kala duwan iyo noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan. Bannaanka u badan iyo bannaanka u door bidaan inay beeraan on ay site gaar ah oo la yaqaan iyo waqti-tijaabiyey. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa yaanyada Liana. Isku xirnaanta Lyana kala duwan Waa mid Baaskiil ah hore iyo waqti isku mid ah noocyo sarreysa.
Tomato Budenovka: qarsoon ee sii kordhaya
Tamaandhada (ama yaanyada) waxay qurxin kartaa miiska, iyada oo lagu darayo dareeraha suuska iyo casriga (beruud kulul oo ballaaran ayaa loo isticmaali karaa oo keliya marka la diyaariyo saladhaha, laakiin sidoo kale qaboojiyaal qabow kala duwan ama cajiimad). Si aad u doorato alaab tayo leh oo si buuxda ugu habboon shuruudahaaga, waxaad u baahan tahay inaad ugu yaraan yartahay is-barbardhigaaga noocyada dhirta.
Tomato Bull ee wadnaha: koritaanka iyo daryeelka
Bannaanka u badan oo yaanyo ku beeri, waxay xiiseynayaan sidii ay u kobcin lahaayeen yaanyo "Bull Heart" ee bannaanka u furan. Waxaan si wadajir ah uga fiirsan doonaa waxyaabaha gaarka ah ee kordhaya noocyada kala duwan ee xiisaha leh. Ma taqaanaa? Bartamaha qarnigii XVI, tamaandhada wuxuu u yimid Europe. Muddo dheer, yaanyada ayaa loo arkaa mid aan la dabooli karin oo xitaa sun ah.
La kulan Tamaandhada Mudan
Bannaanka badan oo xirfadlayaal ah, iyo xitaa bannaanka u hiwaayadda, mar walba ku dadaalaan si aad u hesho dalag ka wanaagsan, taas oo iyaga ku qasbay in ay sameeyaan tijaabooyin qaar ka mid ah noocyada hadda jira ee khudaarta, miraha iyo nooca berry. Maalmahan, waxaan ku guuleysanay inaan soo saarno dalagyada qiimaha badan, oo ay ku jiraan yaanyo casaan ah.
The "Black Prince" waxaa ugu horreyntii loo yaqaan midabka burgundy madow ee midhihiisa. Inta soo hartay waa noocyada kala duwan ee yaanyo badan oo waaweyn oo jajab ah. "Black Prince" ayaa laga saaray shinni laga keenay Shiinaha. Macmiilaha genetic waxaa loo adeegsaday beerashadooda, laakiin noocyada kala duwan looma tixgeliyo GMO, sidaa daraadeed jecel cunnooyinka caafimaad leh waxay isticmaali karaan noocyada kala duwan ee yaanyada aan cabsi lahayn.
Ka mid ah noocyada kala duwan ee yaanyada on suuqa maanta, bannaanka u isku dayayaan in ay doortaan kuwa aan qabyo ahayn marka koray beerta furan, uma baahna garter iyo pasynkovaniya. Dhammaan faa'iidooyinkaas waxay leeyihiin fasal ah Yaan. Tomato Dubrava: Qeexida kala duwan Noocani noocan ah wuxuu leeyahay dherer dherer ah - ma koraan in ka badan 70 cm dhererka.
Noocyada yaanyo yaanyo, korniinka iyo daryeelka tamaandhada
Tomato waa khudradda caanka ah ee beerta beerta. Baaxaddiisu waa mid ballaadhan: cusub, oo leh koorsooyin labaad iyo koowaad, caanaha. Dhibaatooyinka beerashada, sida xaaladaha cimilada, waxay kiciyaan jilayaasha si ay u horumaraan cusub, oo u adkaysta xaaladaha cimilada kala duwan, iyo sidoo kale noocyo cudur.
Noocyada kala duwan ee abuurka iyo geedo dalagyada khudaarta ah ayaa abuuray dhibaatooyin gaar ah oo ku wajahan kuwa jecel in ay qodaan beerahooda. Way adagtahay in la doorto, laguna googo galo soo jeedinta suuqa. Waxaa laga yaabaa in muuqaalka aan caadi ahayn uu noqon doono caws uu ka badan yahay miisaanka leh tamaandho Honey Honey ee uu jecel yahay.
Tamaandho - mid ka mid ah dalagyada beerta ugu caansan. Waxaa laga heli karaa beerta oo dhan. Inta lagu jiro jiritaanka khudraddan, noocyo farabadan ayaa la soo saaray oo leh sifooyin kala duwan waxayna ku haboon yihiin xaalado kala duwan. Tomato "Bariis": sharaxaad iyo noocyo Yaanyo "Bariis" waxaa loola jeedaa noocyada kala duwan ee sharaxaadiisa la xiriirta khudaarta kale.
Tamaandhada had iyo jeer waa xal fiican ee bannaanka. Waa mid aad u fudud in ay ku koraan goobahaaga, waxaana jira faa'iidooyin badan oo iyaga ka mid ah. Marka laga soo tago qiimaha nafaqada, yaanyada ayaa hodan ku ah fiitamiinada iyo nafaqooyinka, waxayna ku qurxin karaan wixii saxa ah. Si aan u raaxaysanno khudraddan cajiibka ah, kuwa wax soo saarka ayaa soo saaray noocyo badan oo hore, oo iyaga ka mid ah noocyo kala duwan oo yaanyo ah oo loo adeegsado, kuwaas oo sii kordhaya sariiraha.
Tomato Marina Grove: beeritaanka, daryeelka, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Bannaanka iyo beeraha waa mid aad u dalbanaya dalaggooda oo inta badan kuma faraxsan yihiin iyaga. Xitaa xirfadlayaal khibrad leh ma aha marwalba inay isku darsadaan dhadhanka wanaagsan ee miraha leh dalag ballaaran. Tani waxay si buuxda u khuseysaa yaanyada. Yaanyo badani waxay dhadhamiyaan weyn marka la isticmaalo cusub, laakiin gebi ahaanba maaha kuwo ku habboon ilaalinta, iyo sida kale.
Tomato "Kate": sharax, dhalid, sifooyinka beeritaanka iyo daryeelka
Noocyo yaanyo "Kate" waxay si fiican u cadeeyeen noocyada hore ee yaanyo. Iyada oo tayo wanaagsan, sida iska caabinta cudurrada iyo xaaladaha cimilada, dabacsanaanta yaanyo "Katya" waxay kasbatay aqoonsi malaayiin qof oo xaafadda deggan. Xitaa bannaanka u janjeeri karaa dhirta sida yaanyo, sababtoo ah uma baahnid daryeel gaar ah.
Tamaandhada kala duwan ee "Raspberry Giant" waxay caan ku tahay dhadhanka iyo cabbirka. Waxa uu ku guulaystay inuu bannaanka u la mid ah midabkiisa oo xiiso leh, dhadhan iyo dhalid. In this article waxaan ku sharrixi doonaa sida loo koro yaanyo "Raspberry Giant", sharaxaad ka duwan noocyada iyo sifooyinka daryeelka. "Raspberry Giant": sharaxaad iyo astaamo noocyo kala duwan oo yaanyo ah "Raspberry Giant" waa noocyo kala duwan, beerashada oo aan u baahnayn xakameyn kobcitaan, sidaa daraadeed, ma noqon doonto lagama maarmaan in la xoqdo dhibcaha koritaanka.
Mikado Pink: Sida loo kobcin yaanyo yaryar
Dhadhanka, muuqaalka iyo wax soo saarka ee noocyo yaryar oo hore yaanyo ah "Mikado Pink" ayaa heshay qiimeyn ku filan oo macaamiisha ah. Muddo 2 sano ah oo jiritaan, noocan oo kale ah ee sharafta leh ee qaababka yurubiyaanka ah iyo waxay kasbadeen magaca aan la magacaabin "imperial". Aynu sii degganaanno tayada yaanyada "Mikado pink" ee sifooyinka iyo daryeelka.
Calaamadaha iyo sifooyinka tamaandhada sii kordhaya "Guard Guard"
Maanta waxaa jira tiro badan oo kala duwan oo yaanyo ah. Aad loo jecel yahay waa noocyada kala duwan ee "Guard Guard", taas oo looga doodi doono maqaalkan. Tamaandhiga "Guardian Red": Taariikhda Dhalashada Geedka Mid ka mid ah gobollada waqooyiga, halkaas oo xilliga kulaylku aad u gaaban yahay, illaa dhowaan waxaa jiray dhibaatooyin soo kordhaya yaanyada.
Musqulaha ee yaanyada sii kordhaya "Sugar Bison" ee lagu koriyo
Tamaandhiga "Sugar Bisis" way ka duwan tahay noocyo kale oo ka mid ah "qaraabada", waxayna heshay dib u eegis gaar ah oo ka yimid beeraley badan. Oo maanta waxaad baran doontaa sharaxaadda iyo codsiga kala duwan, iyo sidoo kale agrotechnology ee khudaarta sii kordhaya ee lagu koriyo. Taariikhda ka saarista tamaandhada "Qandho sonkorta" Noocyo yaanyo "Sonkorta qamriga" ayaa xannibay bannaanka beeraha ee Ruushka iyada oo loo marayo taranta.
Beeraley kasta wuxuu jeclaan lahaa in uu yaanyo ku yeesho sawirka oo ku farxi lahaa dhadhan iyo dhalid. Mid ka mid ah noocyada noocaas ah ayaa loo qoondeeyay dib u eegista maanta. Yaan "Bobcat": Tilmaamo iyo sifeyno Aan aragno waxa kala duwan ee noocaani ay tahay mid cajiib leh iyo waxa aad u baahan tahay inaad taxadarto marka ay koraan. Qeexidda baadiyaha Dhirta ayaa loola jeedaa cabbirka celceliska noocyada kala duwan.